Xog: Xildhibaan amray in maqaayad uu leeyahay laga hor-qaado kontarool laga ilaaliyo madaxtooyada - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xildhibaan amray in maqaayad uu leeyahay laga hor-qaado kontarool laga ilaaliyo...
Xog: Xildhibaan amray in maqaayad uu leeyahay laga hor-qaado kontarool laga ilaaliyo madaxtooyada
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku guuleestay in uu maqaayad uu leeyahay ka hor leexiyo mid kamid ah Kontaroolada laga ilaaliyo Madaxtooyada Soomaaliya.
Kontaroolkaan oo ku yaallo agagaarka Xaawo Taako, ayaa dhagxaantiisa la dhigay ka soo horjeedka Maqaayadda Blue Sky ee uu leeyahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, oo aan go’aansanay inaynan magacaabin.
Xildhibaanka ayaa madaxtooyada Soomaaliya uga dacwooday Kontaroolkaan maadaama maqaayadda horteeda ay istaagi jireen gaadiidka, kadibna ay kasoo lugeen jireen dadka sita karaka aqoon siga dowladda, taas oo saameyn ku yeelatay shaqada maqaayadda.
Inkastoo Xildhibaanka laga hor qaaday, ayaa hadane ciidamada ay kontaroolka hor dhigeen maqaayad kale oo ku dhagan oo uu leeyahay qof shacab ah.
Milkiilaha maqaayadaan ayaa yiri “Aniga Xildhibaan ma’ahi wax walba oo aan sameeyayna waa layga qaadi waayay, mana jirto cadaalad darro ka weyn in Xildhibaan laga hor qaado, qof kale oo muwaadin ahna la hordhigo, canshuurna layga qaado.” ayuu yiri Milkiilaha Maqaayadda ee hada la hor dhigay Kontaroolka laga soo raray maqaayad kale ee uu leeyahay Xildhibaanka ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Si kastaba, saacado kadib markii ay Caasimada Online warkan qortay ayaa dib loo soo celiyey kontoroolki, mana cadda in warka Caasimada Online ay taas horseeday iyo in kale.
Wixii ka dambeeyey weerarkii horraantii bishan lagu qaaday hotelka SYL ee magaalada Muqdisho, oo aad ugu dhow Villa Somalia, waxaa lasii adkeeyey amniga madaxtooyada, ayada oo la kordhiyey baraha control ee dalka lagu baaro.